Okulandelayo | Online Imibuzo
Ikusasa lomsebenzi Quiz
Ikusasa lomsebenzi selilungile manje? Thina lapha kwi-NextMapping ™ sigxile kuzo zonke izinto ezizayo futhi sikusize ufike lapho.
Ukufika esikhathini esizayo kusho ukucabanga okuhlukahlukene okuguqukayo kusuka kulayini kuya ekubonweni okuningi.
Isikhathi sokulinganisa kabusha ikusasa futhi wakhe izakhiwo ukuze ufike lapho. Thatha le mibuzo esheshayo ukubona ukuthi ukuphi kumgwaqo oya esikhathini esizayo. Ngoba indlela enhle yokuncintisana ngokuzayo ukuyakha!
Ingabe inkampani yakho isemaphethelweni ophambili wezobuchwepheshe kufaka phakathi ukufuduka kwamafu kusuka ezinhlelweni zamafa noma ukwenziwa kwamafu ukukhulisa ukusebenza kwebhizinisi?
Qaphela: Ukugxila kwesikhathi esizayo kungukufiswa kwamafu kufaka phakathi ukuphepha okuthuthukile, izixazululo eziningi zamafu, ukusebenza kahle kwamakhasimende kanye nokwanda kwekhono labasebenzi lokukhulisa ifu
Ingabe unayo ingqondo, isakhiwo nezinqubo ezikhona ukuze ube nekusasa lomsebenzi ulungele?
Qaphela: Ukwakha ikusasa eliningi udinga inqwaba yabantu egxile ekucabangeni njengama future futists, ama-humanists, ochwepheshe kanye nabaqambi (umthombo: SingularityU)
Ngabe uye walithola ibanga elisha lokucabanga okubucayi, izinsiza nokusekelwa okudingekayo ukuzulazula esikhathini esizayo?
Qaphela: Okutholile lapha ngeke kusenze sifike lapho (iMarshall Goldsmith)
Ngabe uguqula indlela abaholi abacabanga ngayo ngekusasa lebhizinisi kusuka phezulu kuya phansi?
Qaphela: Ukuqamba okusha okuphazamisayo kungalimaza uma ungeyena owenza okuphazamisayo (uClay Christensen)
Ngabe unalo uhlelo olukumephile lwecebo oluzolandela wena nenkampani yakho?
Qaphela: Isinyathelo sokuqala ukuthola ukuthi okuthile kungenzeka khona-ke kungenzeka (i-Elon Musk)
Uma uphendule ngo-NO kunoma yimuphi wale mibuzo yithuba lakho lokuthi ube nengxoxo nathi mayelana ne-NextMapping ikusasa lakho.
Sicela uxhumane nathi ukusetha ucingo oluhambisanayo ukuze sikhulume ngawe nangekusasa lakho michelle@nextmiling.com.
Ngabe udinga usizo lwethu?
Sine-blogger yezivakashi ezibandakanya ama-CIO's, ama-Behavioral Scientists, ama-CEO, ososayensi beDatha kubandakanya okuthunyelwe ngumsunguli wethu uCheryl Cran.